China Solar Lighting Loudspeaker Box, Best Solar Bluetooth Speaker, Solar Lighting Bluetooth Loudspeaker Box Mutengesi uye Mutengesi
Tsanangudzo:Solar Lighting Loudspeaker Box,Best Solar Bluetooth Spika,Solar Lighting Bluetooth Loudspeaker Box,Portable Solar Lighting Loudspeaker Box,,
Solar Lighting Loudspeaker Box,Best Solar Bluetooth Spika,Solar Lighting Bluetooth Loudspeaker Box,Portable Solar Lighting Loudspeaker Box,,
Home > Products > Solar Speaker System > Solar Lighting Loudspeaker Box
Zvigadzirwa zve Solar Lighting Loudspeaker Box , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Solar Lighting Loudspeaker Box , Best Solar Bluetooth Spika vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Solar Lighting Bluetooth Loudspeaker Box R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
China Solar Lighting Loudspeaker Box Vatengi
Solar lighting loudspeaker box inonyanya kuumbwa nezuva , panoramium iron phosphate mabheteri, Bluetooth circuit, audio drive circuit, high-fidelity stereo horn, LED lamp module uye zvimwe zvikamu zvezuva rinobatanidza mwenje, uye rine Bluetooth audio basa remuganhu zvigadzirwa. Solar lighting loudspeaker box inonyanya kuvimba nesimba rezuva kuti ripe simba rokushanda. Inowanzoiswa mujeri yemhuri, cafe panze, Park square, nzvimbo yebhizimisi, nezvimwewo.
Rinowanzoshandiswa kumunda weBindu BBQ, zviitiko zveChechi, kana mimhanzi inotamba. Solar lighting loudspeaker box inonyanya kushandiswa ne wireless Bluetooth basa remutevedzeri wevatengi (zvakadai semafoni emafoni, pAD tablet yemakombiyuta, kana mabhuku ekunyora uye mamwe magumisiro ane njere neBluetooth function), kuburikidza neBluetooth APP software inogona kuzarura zvakananga solar Bluetooth Sound Lamp, vanogona kubudirira zvakanyanya-kuvimbika mimhanzi kuitamba, kushanda mode uye chiedza chekugadzirisa kushandiswa. Panguva imwecheteyo, zuva rezuva reBluetooth Bluetooth stereo rinogona kuonawo zvinovaraidza zvakasiyana-siyana uye magetsi anojekesa mabasa, zvakadai sekushanda kwekugadzirisa nguva, kukanganiswa kwechinetso chekupomerwa uye kuongorora basa, uye maikorophone real-time voice playing play.